By Name ဖြင့်ဖိတ်ကြားသည့် ပြည်ပခရီးစဉ်များတွင် ညွှန်ချုပ်၊ ဒုညွှန်ချုပ်နှင့် အဆင့်တူများအား မဖြ?? - Yangon Media Group
By Name ဖြင့်ဖိတ်ကြားသည့် ပြည်ပခရီးစဉ်များတွင် ညွှန်ချုပ်၊ ဒုညွှန်ချုပ်နှင့် အဆင့်တူများအား မဖြ??
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလက ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်၊ ကျောင်းများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ် မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးများမှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းဆရာ၊ ဆရာမများအား ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ သင်တန်း၊ ပညာသင်၊ ဆွေးနွေးပွဲ၊ အစည်းအဝေး၊ စာတမ်းဖတ်ပွဲ၊ ညီလာခံ၊ ဖိုရမ်၊ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်များကိုစေလွှတ်ရန် တင်ပြလာသည့်အထဲတွင် By Name ဖြင့် ဖိတ်ကြားလာခြင်းများကို စိစစ်တွေ့ရှိရသည့်အတွက် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှစတင်ပြီး By Name ဖြင့် ဖိတ်ကြားလာသောခရီးစဉ်များကို ခွင့်မပြုတော့ကြောင်းကို ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အဆိုပါကြေညာချက်တွင် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၅ ရက် ရက်စွဲဖြင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် အဆင့်တူရာထူးများကို By Name ဖြင့် ဖိတ်ကြားလာပါက ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှစိစစ်၍ မဖြစ်မနေခွင့်ပြုရမည့် ခရီးစဉ်များကိုသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သင်ကြားရေးဝန်ထမ်း(ပါမောက္ခ၊ တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ ကထိက၊ လက်ထောက် ကထိက၊ နည်းပြ၊ သရုပ်ပြ)များနှင့် အရာထမ်း(ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ ဦးစီးအရာရှိအထိ)နှင့် အမှုထမ်းများအတွက် By Name ဖြင့် ဖိတ်ကြားလာသည့်ခရီးစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အရည်အသွေးမြှင့်တင် ရေး အားပေးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သဖြင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာကော်မတီများဖြင့် စိစစ်၍ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖော်ပြပါရှိသည်။
”ဝန်ကြီးဌာနကိုတင်ပြီး ဝန်ကြီးဌာနကခွင့်ပြုရင် MOFA ကို ခရီးသွားလာခွင့်အမိန့်ကို ထုတ်ပေးလိမ့်မယ်။ ခရီးသွားလာစရိတ်နဲ့ ဝတ်စုံစရိတ်တွေကတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလပြည့်ပြီးရင်တော့ အဆင့်နဲ့လျော်ညီတဲ့စရိတ်ကို ထုတ်ပေးတယ်”ဟု အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးတစ်ဦးက ယခုလ ၈ ရက်က ပြောသည်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကထုတ်ပြန် ခဲ့သောထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆရာ ဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်၊ ပညာရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ၊ NNER၊ တက္ကသိုလ်ဆရာဆရာမများအဖွဲ့တို့က ကန့်ကွက်ကြောင်း ကြေညာချက်များကိုအသီးသီးထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
”ထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအစကတည်းက ဒီအဆင့်တွေအကျုံးဝင်တယ်။ ဒီအဆင့်တွေကတော့ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုတာ မျိုးထုတ်ပေးသင့်တာပေါ့။ အဖွဲ့အစည်းတွေဝိုင်းကန့်ကွက်မှ အခုလိုထပ်ပြီးထုတ်ပြန်တာလို့ထင်တယ်။ ဆက်ပြီးကြည့်ရဦးမှာပေါ့။ ဘယ်လို တွေဆောင်ရွက်ပေးမလဲဆိုတာ”ဟု ပုသိမ်တက္ကသိုလ်မှ ကထိက ဦးသန်းထိုက်အောင်က ပြောကြားသည်။